AMBATONDRAZAKA : Mihorohoro amin’ny sezany ireo tompon’andraiki-panjakana
Matahotra ny sezany ny tompon’andraikitra sasany, hany ka zary tsy tafandry mandry mihitsy rehefa tonga ny andro alalakamisy izay matetika hisian’ny Filankevitry ny minisitra. Ireo izay efa mangidy hoditra eny anivon’ny birao sahaniny ka voatendry tamin’ny alalan’ny didim-panjakana no tena mitaintaina fatratra amin’izao fotoana izao. 30 juin 2017
Eo ihany koa anefa ireo efa ratsy pasipaoro eny amin’ny fiarahamonina noho ny antsojay natao vantany vao nahazo toerana. Betsaka rahateo ny mpisintona lakolosy sy ny mpandefa tatitra any ambony any. Ireo izay nahavita asa ara-dalàna no tsy taitra amin’io fa ireo olona fatra-piedinedina nahazo toerana no lasa tratry ny aretim-po tsy satry.
Misy mihitsy aza no lasa manompo antoko politika sitrany mba mahazo doka sy tsy voahetsika eo amin’ny toerany na ihany koa mba mahazo elo hialofana.
Efa manomboka hitan’ny ankamaroan’ny olona anefa ireny olona mpialokaloka lava eny ambany saokan’ny antoko ireny, hany ka tsy mahataitra intsony raha mahita azy misehoseho lava isaky ny misy hetsika na dia tsy tokony hidirany aza. “Atao akory fa izy no nanome dia izy ihany koa no maka”, hoy ny fomba fiteny malagasy izay.
Ho an’ny mpanara-baovao ihany koa dia efa betsaka no manaraka tsy tapaka ny fampitam-baovaon’ny Filankevitry ny minisitra hiainoana ny hoe iza indray no hitsipaka aty Alaotra Mangoro.